Uma Mikhail Antonov kahle waphawula: "Izintatheli Asizalwa, ziba." Lokhu ibinzana Lifanele yomlando wakhe siqu. Phela, njengoba sasisebasha kakhulu, wayengeke akwazi ngisho nokuthola sicabange ukuthi esikhathini esizayo, uyobe uzipha esinye izindaba kunazo owaziwa siyazimelela Russia.
Mikhail Antonov: Biography minyaka yokuqala
Mihail Nikolaevich Antonov wazalelwa eMoscow ngo-April 11, 1972. Unina wasebenza wobunjiniyela, noyise ngakhonza biko. Ngiseyingane, uMichael ngokuvamile wazishaya isifuba ngomsebenzi sikayise, njengoba i-Soviet brats yempi aba lifana ompetha. Ubaba uye waba isibonelo somfana, futhi ngisho nanamuhla njalo, intatheli uzama ukulandela izimiso esifanayo sokuziphatha Thixo wakhe.
Ngokuphathelene Mikhail Antonov, wayengumuntu onamakhono kakhulu humanities. Nokho, isiyalo ngqo wamupha kanzima kakhulu, kodwa ngenxa ukuthi uzothatha indondo yegolide kusobala akazange abe mahle. Kodwa ikusasa umsebenzi umfana wabona bha - wayefuna ukuba abe mlando. Nokho, bonke ezama ukungena Faculty of History nokuhluleka ukuze Antonov. Futhi zonke washiya - ukuba aye empini.
Ukuqondana kwezinto noma ukudalelwa?
Ngemva demobilization Mikhail Antonov sina wazindla ikusasa lakhe. Ekuqaleni, wayefuna ukuzama futhi ukungena mlando, kodwa abangane bakhe bayayeka kuye. Kwabe sekuvela ukuthi, ngaleyo minyaka, ubungcweti bekulokhu funa kancane, futhi ngenxa yalokho akunakwenzeka alethe imali enhle. Labo bantu belulekwa ukuya MSU Antonov asekele ke ngenxa yokuthi journalism manje kuragela okusheshayo.
Ngenxa yalokho, ngo-1993, Mikhail Antonov namanje libhaliswe ubuhlakani journalism eMoscow State University. Ngemva kwalokho, ngeke nje kuphela ukufunda profession entsha, kodwa futhi ngayo yonke inhliziyo yethu ukuba uyamthanda. Ngaphandle kwalokho, njengoba Antonov uthe waba nenhlanhla kakhulu lapho nabafundisi. Ikakhulukazi, ugqozi zako ezisemqoka kwakungu-Anna Kachkaeva - eyaziwa intatheli yomsakazo "Freedom".
Ngokokuqala ngqá Mikhail Antonov ithole ku-TV, ngisho nakuba ngonyaka wesithathu MSU. Khona-ke wathatha yomnyango umhleli NTV. Esikhathini kusuka 1997 kuya ku-2000. umlobeli othile Lwezinhlelo izindaba nesiteshi esifanayo. Ngo-March 2000, intatheli wahamba wayosebenza kwi "Russia" isiteshi se-TV, lapho aba khona umlobeli we "Vesti".
Kufanele kuqashelwe ukuthi Mikhail Antonov imibiko yabo ihlanganiswa izenzakalo ezishisa Russian. Esikrinini TV, kubikwa ukuthi abantu ngekusasa edabukisayo "eKursk", indlela ovuthayo ngesikhathi Ostankino ithelevishini umbhoshongo. Ngaphezu kwalokho, intatheli akazange anqikaze ukugqamisa izigigaba eziphathelene isenzo kwamaphekula yaseBeslan. Ngenxa yalokho, Mikhail Antonov wethulwa lokuphakamisa Taffy "Oholela Uhlelo ulwazi."
"Izindaba" phezu "Russia" isiteshi se-TV namuhla he is a umlobeli kanye umethuli we replaceable hlelo. Liphinde okuthathwa njengokumele kube njalo njengoba intatheli isimo legatsha German we "Vesti".
Intatheli Russian Kuritsyna Svetlana Igorevna
Ukuziphatha okuhle: umqondo, izinhlobo, izindlela
ERussia: umlando, izinsuku ezisemqoka kanye nemicimbi